केक "अन्डा बिना" - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
स्पंज केक "अण्डा बिना"
खाजा46 मिनेट6 व्यक्ति
तपाईं धेरैलाई पहिले नै थाहा छ, मसँग एक नर्सरी स्कूल छ र हरेक दिन थप बच्चाहरूले केही प्रकारको प्रस्तुत गर्दछन् एलर्जी वा असहिष्णुता। म उनीहरुलाई पार्टी वा जन्मदिन को लागी समय समयमा एक रोटी बनाउन मन पराउँछु। यो नुस्खा ठ्याक्कै एक आमा द्वारा मलाई दिइएको थियो, मामला मा म कहिल्यै एक अण्डा एलर्जी संग एक बच्चा थियो र यो तयार गर्न चाहन्थे कि सबैले यसलाई खान सक्छन्।
म यो मारिया आर, फेसबुक पेज बाट एक साथी सम्म पनी तयार गरीएको थिएन "थर्मोमिक्स रेसिपीहरू" उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि मसँग छ अण्डा बिना स्पंज केक नर्सरी आफ्नो बच्चाको जन्मदिन को दिन ल्याउन, कि अण्डा प्रोटीन को एक असहिष्णुता संग एक बच्चा थियो। मलाई तुरुन्तै यो नुस्खा याद आयो र म कसरी यो केक बाहिर जान्छ द्वारा काटेको थियो। मैले त्यो दिउँसो गरें र हामीलाई यो मन पर्यो!
यो संग बनेको छ सुन्तलको रस र रहन्छ धेरै रसिलो। यो पनि एक धेरै हड्ताल रंग छ।
मलाई आशा छ कि यो नुस्खा बच्चाहरु संग धन्यवाद अण्डा एलर्जी वा असहिष्णुता एक स्वादिष्ट घर का केक को आनन्द लिनुहोस्।
1 स्पन्ज केक "अन्डा बिना"
स्पन्ज केक "अन्डा बिना"
अण्डा असहिष्णुताको लागि एक रसीला स्पन्ज केक।
तयारी समय: 45M
कुल समय: 46M
सूर्यफूल तेल को 35 g
१ पाउच बेकि powder पाउडर (नुस्खा हेर्नुहोस्)
हामी थोरै तेल वा माखन संग मोल्ड तेल।
हामीले गिलास र प्रोग्राममा सबै सामग्रीहरू राख्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामीले तयार पारेको मोल्डमा हामी मिश्रण खन्याउँछौं र हामी यसलाई ओभरको बीचको उचाईमा परिचय दिन्छौं।
३५ वा ४५ मिनेट को लागी बेक गर्नुहोस् वा जब सम्म एक छडी संग पंचर यो सफा बाहिर आउँछ।
थप जानकारी - सुन्तला को रस / खण्ड «अण्डा बिना व्यञ्जनहरु»
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » स्पंज केक "अण्डा बिना"
मार्टा सी भन्यो
नमस्ते केटीहरू !!! सबैभन्दा पहिले, तपाईले यस ब्ल्गमा अपलोड गर्नुभएको प्रत्येक व्यंजन विधिका लागि धन्यबाद, तिनीहरू स्वादिलो ​​हुन्छन् !!! म तपाइँलाई सोध्न चाहान्छु, मोल्डको साइजमा यो केक बनाउनका लागि पिन्ट छ, र त्यसैले मँ कम्तिमा तपाईंको जस्तै मोटाई संग छु। मुरी मुरी धन्यवाद
मार्टा सी लाई जवाफ दिनुहोस्
मार्टा एक सानो प्लमकेक हो, यदि तपाईं थोरै ठूलो बन डबल परिमाण चाहनुहुन्छ भने।
सिल्भिया, तपाईंले थोरैका लागि बनाउने क्लासिक केकको लागि के नुस्खा हो?
सुसाना, म सामान्यतया तिनीहरूलाई सुन्तला केक बनाउँछु र उनीहरूले यसलाई मन पराउँछन्।
नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ? म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु आटा सामान्य वा स्पन्ज केक के हो?
म सामान्य गहुँको पीठो प्रयोग गर्दछु।
नमस्ते राम्रो !!! म सबै दिन तपाईंको ग्लोगमा चिप्लिएको छु, यो उत्तम छ !!! म जान्न चाहन्छु कि रस प्राकृतिक छ कि छैन ???? .... धन्यवाद
हो क्रिस, मैले यसलाई स्वाभाविक बनाएँ, यद्यपि म कल्पना गर्दछु कि यो पनि खरीद गरिएकोसँगै आउनेछ।
मैले शनिबार गरें र crumbs पनि छोडेको छैन। तर यो एक सानो सानो थियो। यसलाई ठूलो बनाउन म रकम डबल गर्न सक्छु र त्यो सही हो, हो?
धन्यबाद केटीहरू !!
यदि सिल्भिया, परिमाणहरू दोब्बर हुन्छ, यद्यपि तपाईंले ओभनमा उसलाई अलि बढी समय दिन सक्नुहुनेछ।
मैले यसलाई चकलेट ड्रपका साथ गरेको छु किनकि मलाई चकलेटसँग सुन्तलाको कन्ट्रास्ट मनपर्दछ र यो मर्ने नै भयो !!!!!! काेशिस गर !!!!
कृपया मलाई क्रिसमस लगको लागि नुस्खा चाहिएको छ मलाई यो मनपर्दछ। त्यो कल्पना गरेकोमा धन्यवाद
एल्सालाई जवाफ दिनुहोस्
एल्सा, जब तपाईं एक नुस्खा चाहनुहुन्छ, यो सूचकांक मा छ कि हेर्नुहोस् वा नुस्खा खोज इञ्जिनमा ब्लगमा लेख्नुहोस्।
यहाँ म तपाइँको लागी छोड्छु। http://www.thermorecetas.com/2010/12/24/receta-postres-thermomix-tronco-nevado-de-navidad/
हेलो, एक प्रश्न, मैले करीव children० बच्चाहरुका लागी गर्नु पर्छ, कुन मात्रा प्रयोग गर्ने? म शायद थर्मामिक्स प्रयोग गरें र म धेरै सानो कुक होइन, तर मेरो भान्जाको लागि म भान्छामा जे पनि लिन्छु गर्न जान्छु।
मलाई लाग्छ कि children० बच्चाहरुका लागी तपाईले amounts बिस्कुट वाbबिस्कुट बनाउनु पर्नेछ। थर्मोमिक्ससँग त्यति क्षमता छैन 😉
फर्नान्डीज सफा गर्नुहोस् भन्यो
नमस्ते सिल्भिया, कस्तो स्वादिष्ट र अण्डाहरू बिना, म यसलाई हेर्नेछु। के तपाईंसँग खमीर बिना केकको लागि एक नुस्खा छ? । धन्यवाद अभिवादन।
Inmaculada Fernández लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते केटीहरू, म नुस्खा बनाउँदै छु, म आशा गर्दछु कि मैले यो सहि बनाएँ
नमस्ते पाकी, कस्तो भयो?
केक अति सुन्दर देखिन्छ, तपाईंले यसलाई एक आदर्श स्पर्श दिनुभयो त्यसैले म चाँडो भान्छामा जाँदैछु, म यो गर्न जाँदैछु।
म तिमीलाई भन्छु, हिजो मैले यो केक २ पल्ट बनाए, पहिलो पटक यो थाहा भयो कि यो भित्र घुसेको छैन, मैले यसलाई अधिक समय दिएँ र यसले थोरै टोस्ट गर्यो, तर यो भित्र समाप्त भएन। मैले ओभन नै नखोली र245 मिनेट पछि फेरि गरेँ। यो थोरै राम्रो थियो, तर यो अझै पनि अलि अलि कच्चा छ। कुनै सिफारिस? धन्यवाद
पेपे, के यो फ्यान ओभन हो? यसलाई अलि बढी तापक्रम पनि चाहिन सक्छ, र यसलाई अलि कम र्याकमा राख्नुहोस् ताकि यसलाई माथि माथि छिटो बनाउँनुहोस्, यो चुल्हाबाट आउँदछ।
म मेरो नयाँ ओभनसँग दुई बर्ष भइसक्यो, यसको फ्यान छ र मैले प्रयोग गरेन, मैले प्रयास गरेँ र मैले बुझेन। र प्रशंसक बिना, मलाई थाहा छैन अब मलाई के हुन्छ, कि यो तपाईं जस्तो मलाई भयो, तिनीहरूले मलाई टोस्ट गरे तर तिनीहरू भित्रबाट समाप्त गर्दैनन्।
र अर्को ट्रिक, जुन म प्रयोग गर्दछु त्यो निम्न छ, यदि यो पहिले नै बाहिर र लगभग भित्रबाट गरिएको छ भने, जुन म स्कीवर हुँ तर यो सफा बाहिर आउँदैन, तर यो पनि दाग छैन। म के गर्दछु म ओभन बन्द गर्छु, अलिकता खोल्छु र यसलाई पन्नीमा पकाउन दिनुहोस् जुन तापले समातेको तातोसँग, तर होसियारीसाथ कि यो बाहिरी भागमा जल्दैन।
ठीक छ, म यसलाई कोशिस गर्दछु, ओभनको फ्यान छ तर म यसलाई प्रयोग गर्दिन। म यसलाई स्वाद लिन्छु र केक तल्लो राख्छु।
नमस्ते मलाई यो ब्लग मन पर्छ मैले पहिले नै केहि व्यञ्जनहरू बनाइसकेको छु ... म केक वा केकको लागि अधिक रेसिपीहरू जान्न चाहान्छु अंडे बिना धेरै धन्यवाद!
नमस्ते राकेल, यहाँ म तिमीलाई स्पन्ज केकको यो लिंक अण्डाहरू बिना छोड्दछु। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ: http://www.misdeseosmasdulces.com/2011/09/bizcocho-de-chocolate-sin-huevo-ni.html
नमस्कार मैले भर्खरै थर्मोमिक्स किनेको छु। मेरी छोरीलाई अण्डाबाट एलर्जी छ र गहुँ दुरुपयोग गर्न सक्दैन; सिलियाक बन्न बिना, अण्डा को लागी मैले orgran को विकल्प भेट्टाए कि धेरै राम्रो काम गर्दछ, तर म जान्न चाहान्छु कि म के पिठो प्रयोग गर्न सक्छु कि गहुँ नभएको व्यंजनहरु संग राम्रो जान सक्छ, धन्यवाद। मेरो लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ
मकजोकलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं हाम्रा केही रेसिपीहरू गहुँ बाहेक अरू नै चीजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। आज उनीहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो छ (मकै, छोला, दलिया ...)। तपाईं आफ्नो Thermomix को साथ ती केहि गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा वा अर्को प्रयोग गर्न सक्षम हुनु प्रत्येक रेसीपीमा निर्भर गर्दछ ... हामीलाई सोध्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईं कुनै एक विशिष्ट अनुकूलित गर्न चाहानुहुन्छ भने।
खुशी हुनुहोस् !!
Bitácoras पुरस्कार मा हामीलाई मतदान गर्नुहोस्। हामीलाई सबैभन्दा राम्रो ग्यास्ट्रोनोमिक ब्लगको लागि तपाईंको भोट चाहिन्छ।
व्यंजनहरू फैलाउनु भएकोमा धन्यवाद जुन एलर्जी पीडितहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ, म एक थर्मोमिक्स प्रस्तुतकर्ता हुँ र म तिनीहरूलाई प्रेम गर्न मद्दत गर्न सक्ने सबै थोरै छ, अग्रिम धन्यवाद
ममेबालाई जवाफ दिनुहोस्
थर्मोरसेटासबाट हामी जहिले पनि व्यंजनहरू खोज्दछौं जुन सबै समूहहरूलाई सन्तुष्ट पार्छ र हामी एलर्जी वा असहिष्णुता भएका मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्दछौं किनकि हामीलाई थाहा छ कि ती अवस्थाहरूमा खाना पकाउन गाह्रो हुन्छ।
के म दही थप्न सक्छु ???
नमस्कार लुसिया, तपाई पूर्ण रूपमा दही थप्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद 😉
नमस्ते, म ब्लग मन पराउँछु।
केक कस्तो राम्रो देखिन्छ। मैले एउटा जन्मदिनको लागि बनाउनुपर्दछ र त्यहाँ अण्डा र ग्लूटेनको एलर्जी छ त्यसैले म कॉर्नमेल प्रयोग गर्न चाहान्छु, के मैले समान उपाय गर्नु पर्छ? के म पनि खमीर थप्न सक्छु? धन्यबाद
अचारको टमाटर चटनी मा mussels संग Monkfish